Kubadda Somali Sport Portal > News > Other Somali Sports
Other Somali Sports News
Odayaasha iyo dhalinyarada deegaamada koofur galbeed ee LONDON iyagoo isku duuban waxay casho sharaf kulmisa soo dhaweyn iyo ambabixin u sameeyeen cayaartooygii degmada Boondheere, Gobolka Banaadir, Naadiga MUQDISHO iyo xulkii QARANKA ee casrigii dahabka kabtan CUMAR CALASOW RAAGE oo aan dhihi karo inuu ka mid ahaa 10kii cayaartooy ee ugu fiicnaa ciyaartoydii kubadda cagta dalkkeena soo maray. Xafladaas oo uu soo abaabulay cayaartooygii qaaliga ahaa AABALIISHA
Waxaan qoraalo hore wax uga taabtay ama ku xusay sida Isboortigu uu uga qayb qaadan karo horumarka dal, dalkaasi ha ahaado mid horumaray (developed) ama ha ahaado mid u baahan horumar (underdeveloped). Waxaa qaybaha bulshadda dunida oo idil ku midaysanyihiin aragtida ah in Isboortigu yahay aalad loo adeegsado horumarka shakhsi, deegaan, qaran, iyo mid caalami. Waxaa sidoo kale Isboortigu dabiibi karaa ama dawo u noqon karaa dhibaatooyinka ama aafooyinka, colaadaha iyo isu soo dhoweynta bulshadda. Waxaan qoraalo taxana ah ku qaadaa dhigi doonaa qaybta Isboortiga kaga aadan horomarinta dalka, maxaa hortaagan? Sideena looga bixi karaa xaalada maanta. waxaa muhim ah in loo arko qoraalkan baal cilmiyeed ee aanu ahayn mid leh ujeedo ka duwan. Waxaan soo dhoweynaynaa fikradaha cidii ka dan leh cinwaankan.